Dia Mankaiza ireo Vola Maloto Giazan’ny Polisy Ao Meksika, Ao Kolombia sy Etazonia? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2016 17:43 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Ελληνικά, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, Español
Miverina ampiasain'ireo sampandraharaha samihafa ireo harena tsy hita avanavana nogiazana tany Kolombia, ary miafara any aminà fitodiana maro any anatin'ny tontolon'ny asam-panjakana sy ny tsy miankina. Sary an'i Susana González Bloomberg tao amin'ny Getty Images. Nindramin'ny Univision ary navoaka rehefa nahazoana alàlana.
Tany Etazonia no notontosain'i Mayra Rocha avy amin'ny Univision, ny dika voalohany tamin'ity fanadihadiana ity, ary naverina navoaka tao amin'ny CONNECTAS sy ny Global Voices noho ny fifanarahana iray hifampizaràna vontoaty.
“Mihevitra ve ianao hoe be loatra ny vola anananao ka tsy hainao intsony hatramin'ny isany?”. Izany no nolazain'ilay filohan'ny fikambanan'ny mpanondrana zava-mahadomelina kolombiana ao Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, tamin'ilay vehivavy niaraka taminy nandritry ny valo taona. Tantara iray fotsiny ihany io, itarafana ny hoe hatraiza ny fiantraikan'ny zava-mahadomelina amin'ny toekarena, fandraharahana iray izay vondrona maro rantsana iraisampirenena momba ny heloka bevava no mitantana azy.
Tamin'ny 2011 nosokajian'ny gazetiboky Forbes ho ao anatin'ireo olona manankerena indrindra eto amin'izao tontolo izao ary faharoa matanjaka indrindra ao Meksika i Joaquín “El Chapo” Guzmán, filohan'ny fikambanana mpikirakira zava-mahadomelina “Sinaloa”, miaraka amin'ny hareny mtentina efa ho iray lavitrisa dolara. Ankehitriny, efa tafakatra ho lavitrisa maro io renivolany io. Raha ny momba an'i Rodríguez Orejuela indray, ilay mpitarika fahiny ny fikambanana mpikirakira zava-mahadomelina tao Cali, tamin'ny 1995 fotoana nahasamborana azy, efa nihoatra ny iray lavitrisa dolara ny hareny, araka ny nambaran'ny ministeram-panjakana kolombiana. Mitovy amin'izay ihany, ny haren'i Pablo Escobar, ilay mpitarika ny fikambanana mpikirakira zava-mahadomelina tao Medellín, dia novinavinaina ho teo anelanelan'ny 9 sy 15 lavitrisa dolara.
Fa inona no niafaran'ireny harena be ireny rehefa injay voasambotra ireo mpanondrana an-tsokosoko ireo? Any Etazonia, omena tombon-dahiny ny sampana nanao ilay fanagiazana. Amin'ny voalohany, ankinina amin'ny mpampanoa lalàna aloha ireo vola na fitaovana nogiazana, izay hamaritra na ampy na tsia ny porofo ho entina mitsara ilay raharaha. Raha vao voaporofo ny tsy maha-ara-dalàna ny loharanon'ilay vola ary efa naharay ny onitra tokony ho azy ireo niharan-doza, dia zarain'ny Departemantan'ny fitsaràna, ao anatin'ny sehatr'ilay lalàna antsoina hoe Fitsinjaràna ara-drariny ny tahiry, ny vola sisa tavela, ho an'ireo sampandraharahan'ny polisy nandray anjara tamin'ny famotorana.
Ao anatin'ity fanadihadiana nalefan'ny tranonkalam-baovao latino-amerikàna CONNECTAS ity, maneho hevitra ilay inspekteran'ny polisin'i Los Angeles, Rodolfo Rodríguez ;
Araka ny voalazan'ilay lalàna, 65 isanjato no miverina amin'ilay andiany nanao ny fanagiazana, 35 isanjato ifampizaràn'ny Fanjakana sy ny ministeram-panjakana, mba hanohizana ireo hetsika hiadiana amain'ny zava-mahadomelina.
Tao anaty famotorana iray notontosain'ny Washington Post, asehon'ireo antontanisa fa teo anelanelan'ny 2001 sy 2014 ny polisin'i Los Angeles dia nandray 18,4 tapitrisa dolara tamin'io fandaharanasa io, ny polisin'i New York 27 tapitrisa dolara ary ny biraon'ny shérif ao Los Angeles, 24,3 tapitra dolara. Araka io fanadihadiana io, nampiasaina ho amin'ny fampitaovana, ny teknolojia ary ny fanazarantena sy ireo hetsika hanohizana ny ady atao amin'ny fanondranana zava-mahadomelina io vola io. Raha tao anaty hetsika federaly no nanaovana ny fanagiazana fanànana, niarahana niasa tamin'ireo andrim-panjakana toy ny FBI na ny DEA, dia apetraka eo ambany fahefàn'ny Ministeran'ny Fitantanambola sy ny Fitsaràna ny vola, ary ireo fanànana sy trano kosa amidy atao lavanty.
Toy izany no nanjo ny Villa an'ilay “capo” kolombana, Pablo Escobar, tao Miami Beach, izay lasanà mpivady avy ao Florida rehefa novidiany iray tapitrisa latsaka, roapolo tana lasa izay. Vidiny tena ambany be raha ho anà Villa iray mitodika any amin'ny ranomasina.
Fanànana atao lavanty sy tsinjaraina amin'ireo niharan-doza
Ao Meksika, na trano io, na soavaly, na fiara matanjaka, rehefa tsy nisy nitaky ireo fanànana ireo, dia miafara amin'ny fanaovana lavanty azy ihany koa. Araka ny ambaran'i Alonso Carriles, talen'ny Sampandraharaham-Pitantanana sy Famindràna Fanànana (miankina amin'ny Ministeran'ny Fitantanambola Meksikana),rehefa giazana ny fanànana, dia hidiana amin'ny toerana tsara ambina ary apetraka ho eo ambany fiadiadian'ny lehiben'ny fampanoavana, mandra-pisokatry ny dingam-pitsaràna anenjehana ireo tompony. Mety efa maherin'ny 30 tapitrisa dolara ny fitambaran'ny vola nogiazana.
Araka ny nambaran'ilay mpisolovava, Gabriel Regino, ireo tranobe, ny tany ary ny hotely sy trano dia afaka amidy amin'ny lavanty ; na izany aza anefa, sarotsarotra kokoa ny mivarotra ny trano, satria mety hiteraka olana ho an'ireo tompony vaovao ny fipetrahana aminà trano iray efa nonenan'ny “capo” iray , na ny fianakaviany. Noho io antony io no nahatonga ny governemanta Meksikana nisafidy ny hampanofa azy ireny amin'ireo fikambanana mpanao asa soa.
Ao Kolombia, vao avy nogiazana ireo fanànana , dia efa manomboka sahady ny dingana ahafahan'ireo voampanga miaro ny fanànany. Raha voaporofo fa tsy ara-dalàna ny fomba nahazoana azy, dia atolotry ny Lehiben'ny Fampanoavana ho fanomezana ho an'ny orinasa iray mitàntana ireo fanànan'ny Tahirimbola Fanonerana ireo Tradoza sy ny Ady atao amin'ny Heloka Nomanina. Any no miafara ny betsaka amin'ireo fanànana fahinin'i Pablo Escobar sy ireo hafa mpitarika fikambanana mpikirakira zava-mahadomelina tao Medellín sy Cali. Izany no antony nanaovàn'ny zanakalahin'i Pablo Escobar filazàna imasom-bahoaka fa na izy na ny fianakaviany, dia samy tsy nisy nitahiry vola na fanànana hafa azo tamin'ny volan'ny fandraharahana zava-mahadomelina. Araka ny nambaran'ny zanany lahy, dia nijanona eo ampelan-tànan'ny governemanta daholo ny zavatra rehetra. Araka ny nambarany, tsy nahazo lova tamin-drainy afa-tsy famantaranandro iray tamin'ny rainy izy.